Ahịa Broadleaf: Tinye ego na Nhazi, Ọ bụghị Ikike Ikike | Martech Zone
N'ime oghere teknụzụ ahịa, enwere nnukwu ibu na sọftụwia dị ka Ọrụ na oke ịzụrụ ihe ịchọrọ na igbe. Ka oge na-aga, SaaS meriri ọnụ ahịa ụlọ ahụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ SaaS wepụrụ ka ha meriri wuo ihe zuo esemokwu mmefu ego. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, ndị na-ere ahịa na-ahụ onwe ha n'ụzọ ọzọ. Eziokwu bu na -ewu na-aga n'ihu na idobe ọnụahịa.
Enwere ọtụtụ ihe kpatara ọnụahịa ụlọ ji agbada:
Utility Mgbakọ nke ahụ naanị chọrọ ka ụlọ ọrụ kwụọ ụgwọ maka ojiji ejirila iri puku kwuru iri puku banye na ntinye ego.
API na SDKs - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ ọ bụla na-enye ngwa mmemme mmemme, na ọtụtụ ngwaahịa ị na-eji na ngwa SaaS na-eji otu API ahụ. Site na ịgafe n'elu ikpo okwu na ozugbo na isi iyi, ị nwere ike ịchekwa ụda ego. Youkwesighi ide koodu mbụ ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ha na-enye Ngwa Mmepụta Akụrụngwa ka ịmalite.
Isi Iyi - ndị mmadụ leghaara arịrịọ nke isi mmalite anya. Ọtụtụ jụrụ ya, na-achọ nchekwa, nchekwa, yana ndị ọrụ raara onwe ha nye nke ngwanrọ ngwanrọ. Mana ulo oru di iche iche abanyela na uzo emeghe nke obughi nani uru ndi ahu nile, ha nwere otutu otu puku ma obu puku ulo oru ndi na-achokwa nchekwa, nchekwa na inye oru.
Usoro - mmepe mmepe na-enye scalable ụkpụrụ ụlọ Ọdịdị na-enye mmepe a nnukwu isi na-amalite na-ewu nyiwe. A na-akwado Frameworks ma na-aga n'ihu na-emeziwanye ka oge na-aga dịka ndị mmepe na-enye nzaghachi ma ọ bụ na-enye ngwọta nke ha.
Tinye ihe ndia niile, na ulo oru ekwesighi ichu aja na njiri mara ya na oru ya. Ha anaghị alakụba akwụ ụgwọ maka azịza nke na-aga n'ihu na-ebuli ọnụ ahịa ka ha na-abawanye. N'etiti ụlọ ọrụ dị ka Ahịa Broadleaf.
Ihe ngbaputa atumatu ahia zuru oke maka mkpa 500, Mgbasa ozi na-enye arụmọrụ kachasị achọ maka nkwado B2C, B2B, na B2B2C eCommerce na uru kachasị mma na ahịa. Enwere ike ịhazi usoro ọ bụla iji hụ na saịtị eCommerce dabara na ihe ị chọrọ. Ọrụ siri ike n'ime usoro dị larịị na-agbazinye ụfọdụ njirimara ndị na - eme Broadleaf pụọ na ndị ọzọ. Enwela mmachi na ndepụta atụmatụ ọzọ.
na IRCE, M na ịnọdụ ala na Brian Polster nke Broadleaf Commerce ma kwurịtara etu nke a si agbanwe mgbanwe nke azụmahịa e-commerce ma na-eme ka usoro ntanetị dị ka Broadleaf mara mma nke ukwuu maka ndị na-ere ahịa na ụlọ ọrụ azụmahịa n'ịntanetị nke chọrọ ngbanwe na usoro ịhazi maka ịre n'ịntanetị.
Enterprise atụmatụ nke Ahịa Broadleaf na-agụnye:
Ụgbọ ibu azụmahịa - gụnyere ike ijikwa ụgbọ na usoro ndenye ọpụpụ yana ike ijikọ ire ahịa na azụmaahịa na ihe dị na ụgbọ.
Chọọ na Chọgharịa - Nchọpụta ọchụchọ smart, nkenke nhazi, onye ọrụ webatara URL, yana omume SEO omume enyi niile na-eme ọ bụghị naanị nnukwu ahụmịhe onye ọrụ, kamakwa saịtị achọpụtara.
Nlekọta Iwu - Basic Order Management nyochaa, ọnọdụ na nkọwa niile dị maka ndị nnọchiteanya ndị ahịa (CSRs), ebe ndị ahịa nwere ike ime ka ị mata ọkwa usoro site na ozi email. Maka mkpa ndị siri ike, Broadleaf nwere ike ijikwa iwu nkewa, usoro mmezu, usoro RMA, na iwu azụmahịa gbasara mkpa eCommerce.
Nkwado Ndị Ahịa - Aha ma ọ bụ na-edeghị aha, na ma ọ bụ na-enweghị ozi kọntaktị, Broadleaf na-enye ohere ka ndị ahịa na-agafe ọtụtụ ahịa na njikwa atụmatụ… site na ọnụahịa pụrụ iche na ndị ahịa na-emepụta ọdịnaya.
Enyele na n'ọkwá - nye onyinye achọrọ maka ndị ahịa, iwu, ihe na ọnọdụ ọnụahịa. Site na ịzụta otu, nweta otu (BOGO) iji ree ya iji nye onyinye ahaziri iche.
Njikwa ngwaahịa - akụkụ niile nke Marketingzụ ahịa na chazụ ahịa. Mee ka ọ dị mfe dịka ịbanye aha ngwaahịa, nkọwa, ọnụahịa, na URL n'okpuru otu udi, ma ọ bụ dị ka mgbagwoju anya dị ka ịkọwapụta nhọrọ ngwaahịa, ozi ahịa, mgbasa ozi metụtara ya, nhọrọ mbupu na ngwaahịa.
Multi-Ihe niile - Multi-tenant, multi-site, multi-currency, na multi-ọwa.
Nchịkọta Njikwa ọdịnaya - onye nchịkọta WYSIWYG iji jikwaa ihe dịka blọọgụ na ibe ọdịnaya ndị akọwapụtara na mbụ.
Ma n'ezie, usoro a na-enye ụlọ ọrụ ohere ịgbatị ihe ọ bụla, gbakwunye ụlọ ọrụ nke aka ha, ma dochie ma ọ bụ gbasaa ọrụ ọ bụla, DAO, ma ọ bụ mepụta ndị na-achịkwa omenala. Akwụkwọ ikike mbipụta nke ụlọ ọrụ gụnyere nkwado ọkachamara na nkwekọrịta ọkwa ọrụ (SLA).
Tags: akwụkwọ ozi brianmgbasa oziahia ahiaCommercee-azụmahịaecommerce
Nke a bụ 10zọ XNUMX Can Pụrụ asebawanye Njikọ Aka na Ọdịnaya Anya